Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. काठमाडौंको सितापाइला-भीमढुंगा सडकको अवस्था दर्दनाक – Emountain TV
काठमाडाैं ३ साउन । राजधानीको अति व्यस्त सडक कलंकी नागढुङगा सडकको विकल्प बन्न सक्ने सितापाइला भीमढुङगा सडक निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा छ । वर्षाेैदेखिको निर्माणाधिन यो सडक अहिलेको वर्षाले हिंडि नसक्नुको भएको छ ।
सडकमा ठूलाठूला खाल्डा खुल्डी, जमेको पानी र हिलोले स्थानीयले धेरै सास्ती खेप्नु परेको छ । पैदल यात्रुलाई मात्र होइन सवारी साधन चलाउनेलाई पनि निकै सकस छ । सडकको नाजुक अवस्थाले आजित भएका स्थानीयले सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साँसद तथा नागार्जुन नगरपलिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यो सडकको अवस्था हेर्दा लाग्छ, यो कुनै दुर्गम ठाउंको बन्दै गरेको सडक हो । कुनै विकट गाउँसंग जोडिने सडक जस्तो देखिन्छ । सडकका खाल्डा खुल्डी, हिलो, धुलो र अव्यवस्थित ढलले यसै भन्छ ।
तर यो सडक दुर्गम ठाउँको नभई देशको राजधानी काठमाडौँ कै हो । नागार्जुन नगरपालिकामा रहेको सितापाइलाबाट भीमढुङगा जाने सडक हो यो । यसलाई सितापाइला रामकोट सडकको रुपमा पनि चिनिन्छ ।
यो सडक अवस्था यस्तो भएको धेरै भईसक्यो । यहाँका स्थानीयहरु हरेक दिन यस्तो सडकमा आवातजावत गर्न बाध्य छन् । यो सडकको निर्माण अरु बेला त हुन सकेन नै असारे बजेटले समेत यो सडकको अवस्थालाई देखेन ।
यो सडक निर्माणका लागि यहाँका स्थानीयहरुले शुक्रबार एक कार्यक्रममा क्षेत्रका सांसद तथा नगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकार्षण गराएका छन् । राजनैतिक दलहरु लगायत जनप्रतिनिधिहरुलाई बेलाबेलामा घच्घचाए पनि आश्वासन बाहेक कुनै कार्य नभएको आजित भएका स्थानीयहरुको गुनासो छ ।
स्थानीयहरुको गुनासोका सम्बन्धमा नागार्जुन नगरपालिकाका उपमेयर सुशिला अधिकारीले जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्थानबाट सक्दो कार्य गरिरहेको बताउनु भयो । सडक निर्माणका लागि आउनु पर्ने बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर मात्र आएकाले सडक निर्माण हुन नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका प्रदेश ३ का सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यले आफुले ठेकेदारलाई पटकपटक भेटेर निर्माण कार्य निरन्तरता दिन सम्झाएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागी सांसद, जनप्रतिनिधि, स्थानीय सबैले सडक निर्माणका लागि समन्वय गरेर अगाडी बढ्ने ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । संधै जसो जाम भईरहने कलंकी सडकको विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने यो सडक बन्न सकेमा कलंकी सडकमा जाम तथा चाप कम हुने विज्ञहरुको बुझाई छ